Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica nabatara ọrụ ọhụrụ sitere na ụgbọ elu America
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Mmelite njem Jamaica
Jamaica anabatala ọrụ ikuku ọhụrụ site na Philadelphia International Airport (PHL) gaa na Kingston's Norman Manley International Airport (KIN) sitere na ụgbọ elu America, na-enye nhọrọ ọzọ dị mma maka ndị njem si Northeast iji ruo agwaetiti. Ụgbọ elu mbụ ahụ gawara na Nọvemba 4 wee mee emume na mmemme ọdịnala na-egosipụta ọdịbendị na-ekpo ọkụ na nke dị egwu nke agwaetiti ahụ mgbe ọ rutere Jamaica.
Ndị nnọchiteanya si Jamaica, American ụgbọ elu, na Philadelphia International Airport gbakọtara ịnabata ndị njem na-aga Jamaica na ụgbọ elu ọhụrụ ahụ.
Ụgbọ elu ọhụrụ ndị a na-aga Jamaica si Philadelphia na-enye nhọrọ ndị ọzọ dị mma maka ndị ọbịa na ndị Caribbean si North Eastern US iji gaa agwaetiti.
Ọ bụ oge kacha mma n'afọ iji metụta ndị bịarutere oge dị elu nke Jamaica.
"Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu ịnabata ọrụ ọhụrụ a site n'aka ndị na-ebu ụgbọ elu anyị kachasị ukwuu, American Airlines," ka onye nduzi nke njem nlegharị anya, Jamaica, Donovan White kwuru. "Ụgbọ elu ọhụrụ ndị a na-aga Jamaica si Philadelphia na-enye nhọrọ ndị ọzọ dị mma maka ndị ọbịa na ndị Caribbean si North Eastern US iji gaa agwaetiti. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị si mba ọzọ bi na mpaghara a, ọ ga-adịrị ha mfe ugbu a karịa mgbe ọ bụla ka ha efe efe ziri ezi banye Kingston. Anyị na-enwekwu ekele maka ndị America maka ịmalite ọrụ mgbakwunye a n'oge kachasị mma n'afọ iji metụta ndị bịarutere oge dị elu nke Jamaica. "
Ndị nnọchiteanya si Jamaica, American ụgbọ elu, na Philadelphia International Airport gbakọtara n'ọnụ ụzọ ámá ịnabata ndị njem na -aga Jamaica n'ụgbọ elu ọhụrụ ahụ, gụnyere ọtụtụ ndị ọrụ njem na-akwado maka njem ndị njem site na Jamaica Tourist Board. Na mgbakwunye na ịkpụ rịbọn ahụ, a na-anụ ụtọ mmadụ niile site na ụda na-ada ụda nke egwu Jamaica na mkpọ azụ azụ Jamaica. A na-esikwa na Irie Entrée, ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ Jamaica nke dị na Filadelfia, na-enye ndị njem nleta ụtọ n'àgwàetiti ahụ. Ndị njem gara n'ihu atụpụta kọfị Blue Mountain a ma ama nke Jamaica.
Dị ka Jim Tyrrell si kwuo, onye isi ọrụ na-ahụ maka ego n'ọdụ ụgbọ elu Philadelphia International Airport, Kingston bụ ebe na-aga nke na-emezu ụkpụrụ maka ihe ndị njem nke oge a na-achọ.
“Ka ndị njem na-amaliteghachi njem ha, ebe kacha elu anyị hụrụ ka ndị mmadụ na-eme njem bụ ndị nwere
anyanwụ, aja na osimiri na kwa ndị ebe ha nwere ike ịga leta ezinụlọ ha na ndị enyi ha,” Tyrell kwuru. "Kingston na-enyocha igbe niile. Ọ mara mma ma bụrụkwa otu n'ime ebe ezinaụlọ na ndị enyi na-aga na Filadelfia. Ugbu a, ha nwere ike isi n'ọdụ ụgbọ elu obodo fepụ gakwuru ndị enyi na ụsọ mmiri ngwa ngwa. "
Mgbe ọ rutere na Jamaica, ọdụ ụgbọ elu Norman Manley International Airport (KIN) nke Kingston nabatara ụgbọ elu ahụ site n'iji ekele mmiri ọdịnala na ekele ọkọlọtọ, na ọkọlọtọ Jamaica na US na-efegharị n'akụkụ ibe ha n'okirikiri ụgbọ elu ahụ. Ndị ọrụ si na Jamaican Tourist Board, Ministry of Tourism na Jamaica Hotel na
Otu ndị njem nlegharị anya na-abịakwa kelee ndị njem na-awụpụ ebe a na-eme egwu ndụ dị egwu n'azụ. A na-enye ndị na-anya ụgbọ elu na ndị ọrụ ụgbọ elu onyinye, n'ụzọ ziri ezi n'àgwàetiti ahụ, iji gosipụta ekele maka ọrụ ha n'oge nnabata nnabata.
Ụgbọ elu American ụgbọ elu na-anaghị akwụsị akwụsị na Kingston (KIN) na-arụ ọrụ ugbu a ugboro atọ kwa izu Mon/Thurs/Sun si Philadelphia (PHL) na-apụ na 9:40AM wee rute Kingston (KIN) na 1:32PM. Ọrụ ọhụrụ a bụ ndị America
Ụzọ ụgbọ elu nke abụọ na-adịghị akwụsị akwụsị site na PHL gaa Jamaica, na-emeju ụgbọ elu ndị na-ebu ya na-adị kwa ụbọchị na-aga Montego Bay. Usoro ụgbọ elu nwere ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa, yabụ a na-agba ndị njem ume ịlele www.aa.com maka oge emelitere kachasị.
N'ime ọnwa a, American ụgbọ elu enyochala ụgbọ elu ejiri na ụgbọ elu na Montego Bay (MBJ) site na isi obodo ha dị na Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA), na Philadelphia (PHL) iji jiri obosara ọhụrụ ha. Bodied Boeing 787-8 Dreamliner maka ọrụ ndị a. Onye na-ebu ya na-arụ ọtụtụ ụgbọ elu na-adịghị akwụsị akwụsị kwa ụbọchị na-aga ebe site na ọtụtụ obodo US gụnyere Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), Boston (BOS), Dallas/Fort Worth (DFW, na Charlotte (CLT).